Power Functions မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego Star Wars 10178 Motorized Walking AT-AT ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 258 Views စာ0မှတ်ချက် AT-AT ကို AT Walking 10178, 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, 4483 ကို AT-AT, 75313 ကို AT-AT, 7662 ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် MTT, အမေဇုံ, AT-AT, Lego, Lego Power Functions, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Power Functions, reviews, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
Lego Star Wars လမ်းလျှောက်သူသည်အခြားမည်သူနှင့်မျှမတူဘဲ 10178 Motorized Walking AT-AT သည်အထူးခြားဆုံး LEGO အစုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့် LEGO စက်မှုစာနယ်ဇင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်လက်စားချေခြင်းခံရသည်
04 / 07 / 2021 04 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 171 Views စာ0မှတ်ချက် အုတ်သိပ္ပံ, Lego, Lego YouTube, Power Functions, သိပ္ပံပညာ, ဗီဒီယို, YouTube ကို
ဆောက်သူတစ် ဦး သည်စားပွဲများကိုလှန်လှော။ LEGO ကိုသာ သုံး၍ စက်မှုစာနယ်ဇင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်၊
13 / 06 / 2021 13 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 317 Views စာ0မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, ဇွန်လ, Lego, LGBTQ +, LGBTQIA +, မဲ Ashton, Power Functions, မာန်, မာနထောင်လွှားသည့်လ, နည်းပညာ
ချာလီနှင့်ချောကလက်စက်ရုံတို့သည် LEGO တွင် 10K သို့ရွှေလက်မှတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် Ideas
24 / 04 / 2021 24 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1127 Views စာ0မှတ်ချက် ချာလီနှင့်ချောကလက်စက်ရုံ, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်, Power Functions, Powered UP, Roald Dahl, Tim Burton, ဝီလီ wonka, ဝီလီ Wonka & ချောကလက်စက်ရုံ
Lego Ideas ချာလီနှင့်ချောကလက်စက်ရုံအခြေပြုစီမံကိန်းသည်စုဆောင်းခြင်းအတွက်ရွှေလက်မှတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
21 / 03 / 2021 22 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 679 Views စာ0မှတ်ချက် လှေ, စမ်းသပ်မှု, သစ်တော, Lego, Lego အုတ်, အသေးစား, စက်, Power Functions, ရေငုပ်သင်္ဘော, စမ်းသပ်, ရေ, YouTube ကို
အဆိုပါ LEGO Group ရံဖန်ရံခါရေနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဒီဇိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်၊ သို့သော် LEGO YouTuber တစ်ခုသည်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
07 / 03 / 2021 07 / 03 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1003 Views စာ0မှတ်ချက် စက်ကိရိယာ, ဂီယာ, Lego, Lego Power Functions, Lego Technic, စက်ယန္တရား, စက်ကိရိယာ, စက်, ကား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်, Power Functions, နည်းပညာ, YouTube ကို
LEGO ပန်ကာသည်ရွေ့လျားနေသော Jeopardy! အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပအခွန်ဆက်အဖြစ်မော်ဒယ်
30 / 01 / 2021 30 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 756 Views စာ0မှတ်ချက် အဲလက်စ် Trebek, အန္တရာယ်!, Lego, စိတ်ရောဂါ, Power Functions, နည်းပညာ
LEGO ပရိတ်သတ်တစ် ဦး သည်အဲလက်စ်ထရီဘတ်ကိုအောက်မေ့ရာပွဲတွင်နာမည်ကျော်ဂိမ်းပြပွဲ Jeopardy! ၏အိမ်ရှင်အားဂုဏ်ပြုခြင်း
Lego Powered Up 88015 ဘက်ထရီ Box ကိုယခု LEGO.com မှာရရှိနိုင်ပါပြီ
20 / 01 / 2021 21 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1312 Views စာ0မှတ်ချက် 42113 ဘဲလ် Boeing V-22 Osprey ရဟတ်ယာဉ်, 88015 ဘက်ထရီ Box ကို, Lego, Power Functions, Powered UP, နည်းပညာ
အဆိုပါ LEGO Group သီးခြားစီဖော်ပြထားသည် Powered Up 88015 ဘက်ထရီ Box ကို၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်, အခြားလမ်းကမ်းလှမ်း
သတ္တုကျိုးရန် LEGO အုတ်ဘယ်လောက်ယူရမည်နည်း။
10 / 01 / 2021 10 / 01 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 950 Views စာ0မှတ်ချက် ဂီယာ, Lego, Lego Technic, စက်, Power Functions, Power Functions 2.0, နည်းပညာ, YouTube ကို
ပိုမိုခိုင်မာသည့်မေးခွန်းဖြစ်သောပလပ်စတစ် LEGO အုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သတ္တုအပိုင်းအစတစ်ခုအားယခုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအဖြေပေးခဲ့သည်